रहस्यमयी शिवलिङ्ग, दिनमा तीन पटक रंग बदल्छ दुई दिन भित्र तपाईंको काम बन्नेछ , ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला ! – Taja Khawar
रहस्यमयी शिवलिङ्ग, दिनमा तीन पटक रंग बदल्छ दुई दिन भित्र तपाईंको काम बन्नेछ , ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला !
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २५, २०७८ समय: ११:३३:१४
June 8, 2021AdminLeave A CommentOn रहस्यमयी शिवलिङ्ग, दिनमा तीन पटक रंग बदल्छ दुई दिन भित्र तपाईंको काम बन्नेछ , ॐ लेखी सेयर गर्नुहोला !
एजेन्सी । विश्वका कैयौं रहस्य अहिलेसम्म सबै सामु आउन सकेका छैनन् । भौतिकवादको सिद्धान्त कण्ठस्थ पारेर आध्यात्मिक क्षेत्रलाई पूरै सर्वनाश गर्न लागिपरेकाहरूलाई पनि कहिलेकाँही भेटिने रहस्यले आश्चर्यचकित पार्ने गरेको छ । भगवान शिवको हिन्दु धर्ममा विशेष महत्व छ । भोलेनाथमा रुपमा चिनिने शिवलाई देवहरुको देव महादेव पनि भनिन्छ ।भगवान शिवका चमत्कारका कहानीहरु पौराणिक कथाहरुमा उल्लेख पाइन्छिन् ।
विश्वभरमा भगवान शिवका हजारौं मन्दिरहरु छन् । जो आफैंमा एक रहस्य लुकाएर बसेका छन् । जसको रहस्य आजसम्म कसैले खुलाउन सकेका छैनन् । भारतमा एक यस्तै मन्दिर छ । अचलेश्वर महादेव मन्दिर, जसले वैज्ञानिकका अगाडि पनि ठूलो चुनौती खडा गरेको छ ।
शिवलिङ्गको रहस्यमयी जरास्थानीयका अनुसार अहिलेसम्म शिवलिङ्गको अन्तिम जडसम्म पनि कोही पुग्न सकेका छैनन् । यो शिवलिङ्ग पृथ्वीको निकै गहिराईसम्म पुगेको छ । एक पटक यसलाई पत्ता लगाउने उत्खनन पनि गरिएको थियो । कैयौं दिनसम्म उत्खनन गरे पनि अन्तिम विन्दुसम्म कोही पनि पुग्न सकेन ।
पछि उत्खननको काम नै रोकियो ।यो अदभूत अचलेश्वर महादेवको मन्दिरमा मानिसहरु निकै श्रद्धाका साथ पूजा गर्न आउँछन् । यो शिवलिङ्गको दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मानिसको मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ । यहाँ आउने भक्तजन आफूले चाहेको जीवनसाथीको कामना पनि गर्दछन् । यदि कुनै अविवाहित जोडी यस मन्दिरमा आफ्नो प्रियतमाको इच्छा लिएर आउँछ भने, शिवलिङ्गको दर्शनपछि उसको कामना पूरा हुने स्थानीय बताउँछन् ।
Last Updated on: June 8th, 2021 at 11:33 am